Home Whitening | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Posts tagged "caddeeyo guriga"
Ilkaha caddeeyo - Hortagga ka fiican yahay daawo
habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha
ilkaha waa mid aad u muhiim. Waxaan u isticmaali waqtiga oo dhan in wax cunaya oo hadlaya, iwm. nolosha qiyaasi iyaga oo aan. Waxay sheegeen in aysan haysan in aad cadaydo ilkahaaga – kaliya kuwa aad rabto in aad sii. Sidaas daraaddeed iyaga dayactirka waa waajib. Waxaan dhamaanteen rabnaa in ilkaha cad la dhalaalayay in aan ku aragno commercials, wargeysyada iwm. si ay u gaadhi, aan u isticmaalno habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha. caddeeyo strips, cadayga, caddeeyo dhaqmo ama daaweynta la ilkaha wuxuu noqon karaa mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican si ay u caddayn ilkaha.
Ka Hortagga ka fiican yahay daawo. Daryeelka ilkaha waa in bilowdo halka waxaan nahay dhallinyaro ah. Markii aan ku jiray wax yar aan la weydiiyey in aadan cunin wax badan macaan, shokolaatada ama wax cabitaan acidic si looga hortago ilkaha noo huruud. Sigaarka, caffeine, da iyo daawooyin iyo sidoo yeeli karaan ilkaha noo. Taasi waa sababta ay tahay in aan ogaado ah habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha, na in laga war hayo oo looga hortago kuwa wax aan loo baahnayn in la abuuro Wasaqda ilkaha.
Talooyin looga Hortagayo Uskag Ilkaha
Caday oo si joogto ah u nadiifin. Tani waa habka ugu fudud oo ugu aasaasiga ah si looga hortago in ilkaha si tartib ah.
Caddeeyo cadayga waa ku wareegsanaa oo dhan. Waxay waxaa laga iibsan karaa farmasiyada iyo raashinka qiimaha saaxiibtinimo miisaaniyadda. Waxa ay heer sare shaaciyey in ay u caddayn karin ilkaha laakiin dhab ahaantii waxay qayb ahaan u caddayn karin ilkaha. Sidoo kale hubiyo in ay calaamadsan wax shaabad lagu ansixiyey iyo caafimaad cadeeyay inuu u caddayn ilkaha.
Aynu daawan waxa aannu cabno. Cabitaano in ay hodan ku yihiin kaafeynta leh sida qaxwada, soda, shaah, iwm. waa mujrim ah. Ka dheerow ka ama isku day in aad u qaadato in qaybo yaryar oo.
Sigaar kaliya ma dhaawici sanbabadaada iyo maqaarka; waxay sidoo kale dhaawici iyo gudcur ilkahaaga naga siiyo sababo dheeraad ah inuu sii joogo iyaga ka.
Qaar ka mid ah kaniiniyada aan qaadan sidoo kale waxay keeni kartaa inuu jebiyo ilkaha noo. Iska ilaali Antibiyootikada Tetraclyne laga yaabaa in gudcur ilkaha noo.
Caddeeyo strips iyo jel sidoo kale laga yaabaa in u habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha, waxaa jira wax badan oo iyaga ka mid ah mafrashka oo aadan in qaali.
Qaado guriga caddeeyo baakidh ka ilkaha waxaa laga yaabaa in qaali, Laakiinse kuwanu waa caadadii taam idiin sababtoo ah tani waxay noqon kartaa habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha oo kaa caawin doona inaad u caddayn ilkaha kuwii tan iyo markii ay gacan ka geystaan ​​xaqiijinta in bleach ku joogo xiriir la ilkaha ee la caddeeyo ugu badnaan.
Haddii dhan kale ka baaqan. Tani waa doorasho ee la soo dhaafay si aad u doorato ah habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha waa in la tixgeliyo dhabta ama galaas biraha, ay lacag badan, laakiin ay xallin doonaan dhammaan Jahwareer ilko caddeeyo.
Kuwani waa uun qaar ka mid ah habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha caawin kara in ka dhigaysa ilkaha fiirin firfircoon iyo dhaldhalaalaan. Laakiin iyaga ka hortagga had iyo jeer waa fiican yahay daawo. Sidaas laga kuwa laga yaabo in ay wada wasakheeyey ilkaha si iska sii joogo si ilka jidka oo dhan. Haddii aad ku qanacsan tahay talooyin kuwa, aad iyo sidoo kale ka raadin kartaa internet-ka wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qaraabo habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 5, 2016 at 12:15 AM
Categories: Caddeeya aanu u caddayn Talooyin Ilkaha Tags: habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha, caddeeyo guriga, Talooyin looga Hortagayo Uskag Ilkaha, ilkaha cad la dhalaalayay, ilkaha caddeeya